ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သားသမီးရှိသူမိဘတိုင်း ဖတ်ထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ - Hello Sayarwon
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သားသမီးရှိသူမိဘတိုင်း ဖတ်ထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ
Dr. Thurein Hlaing Win မှ ရေးသားသည်။3ရက် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သားသမီးကိုနားလည်နိုင်ဖို့အတွက် ပိုအဆင်ပြေတဲ့အချက်တစ်ချက်က ကိုယ်လည်းဒီအရွယ်ကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အသက် ၉ နှစ်လောက်ရောက်ပြီဆိုရင် ကလေးမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်လာပြီးလောက်ပါပြီ။ နောက်သုံးနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါ သား သို့မဟုတ် သမီးလေးက မြီးကောင်ပေါက်လို့ခေါ်ကြတဲ့ အရွယ်ကို လုံးလုံး ရောက်ရှိသွားတော့မှာပါ။ အဲဒီအချိန်ကျရင်တော့ ခန္ဓါကိုယ်မှာပဲ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ အပြုအမူပိုင်းမှာပါ ပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်။
အများအားဖြင့် ဒီအဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်ရတော့မယ့် ဆယ်ကျော်သက်တိုင်းဟာ အပြုအမူပိုင်းမှာ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ပြောင်းလဲလာတတ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်ရတဲ့အချက်က ဒီအဆင့်မှာကလေးတွေက အကြောက်တရားနည်းပြီး လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးမှားတွေရှိတတ်တာပါ။ ဒီလိုဖြစ်ရတာက မိန်းကလေးရော၊ ယောကျာ်းလေးမှာပါ ခန္ဓါကိုယ်တွင်းဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီအနေအထားမှာ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအားပေးစောင့်ရှောက်သလဲဆိုတာပေါ် အများကြီးမူတည်နေပါတယ်။
သားဖြစ်သူ၊ သမီးဖြစ်သူရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်က မိဘဆိုတာ အဓိကကျောထောက်နောက်ခံတစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ်ကတည်ဆောက်ပေးလိုက်တဲ့မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ကလေးရဲ့နောက်ပိုင်းတစ်သက်တာ ဘယ်အပိုင်းကဏ္ဍမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ သူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝအတွက် အဓိကကျတဲ့ အားပေးစောင့်ရှောက်မှုကိုပေးတဲ့အခါ နည်းလမ်းမှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့တခြားဆယ်ကျော်သက်တွေလိုပဲ သင့်ရဲ့သားငယ် သို့မဟုတ် သမီးငယ်ရဲ့ခန္ဓါကိုယ်မှာ သိသာတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာ အမွေးအမှင်တွေရှိလာမယ်၊ လိင်တံ သို့မဟုတ် ရင်သား အရွယ်အစားဖွံ့ဖြိုးလာမယ်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာမယ် စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ယောကျာ်းလေး၊ မိန်းကလေးတွေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ပြီလို့ပထမဆုံးသေချာတဲ့ လက္ခဏာက ညဘက်အိပ်ပျော်နေတုန်း လိင်စိတ်အထွဋ်အထိတ်ရောက်ကြတဲ့ Wet dreams လို့ခေါ်ကြတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။
မြီးကောင်ပေါက်အဆင့်မှာ ကလေးက တချို့သူတွေ၊ အထူးသဖြင့် နီးစပ်ရာအပေါင်းအသင်းတွေထဲက တချို့ကို စိတ်ကစားတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဖြူစင်တဲ့သဘာဝဖြစ်ပေမယ့် ကလေးကို သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အသိပညာဗဟုသုတလုံလောက်အောင်မပေးထားရင်၊ ကာကွယ်မပေးထားရင် မလိုလားအပ်တဲ့အန္တရာယ်ဆိုးတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
မိဘတွေအနေနဲ့ အရင်ဆုံးနားလည်ထားရမယ့်တစ်ချက်ကက လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သားသမီးက သိချင်လာတယ်၊ စူးစမ်းချင်လာတယ်ဆိုတာ အမှားတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒီလိုမေးတာနဲ့ပဲ လိင်ကိစ္စတွေကျူးလွန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့သိဖို့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေ ကိုယ်ကအသိပညာပေးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှ သူတို့ကိုယ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မှာပါ။
ကလေးကို လိင်မှုရေးရာ အသိပညာပေးခြင်း
မေးခွန်းမေးရအခက်ဆုံးက လိင်ကိစ္စအကြောင်းတွေပါ။ အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးလိုမျိုး အဖြစ်များတဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေအပြင် လိင်မှုကိစ္စနဲ့ဆက်နွှယ်နေတဲ့အန္တရာယ်တွေအကြောင်းလည်း ကလေးကိုအသိပေးသင့်ပါတယ်။ လိင်ကိစ္စကနေ ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါပိုး (HIV)၊ သားအိမ်ကင်ဆြာဖစ်စေနိုင်တဲ့ Human papillomavirus (HPV) ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ၊ ရေယုန်နဲ့ တခြားလိင်မှတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေအကြောင်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်နဲ့သင့်ကလေး သိထားသင့်တဲ့ HPV ဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်
Human Papillomavirus ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်မှုအများဆုံးရောဂါပိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ပေါ်မှာ HPV ကူးစက်ခံထားရသူ လူဦးရေ သန်း ၆၃၀ ခန့် ရှိနေပြီး ထပ်တိုးကူးစက်ခံရသူ တစ်နှစ်ကို ခြောက်သန်းခန့်ရှိနေပါတယ်။ သင့်ကလေးက ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရှိသူနဲ့ လိင်အင်္ဂါမှတဆင့် သို့မဟုတ် ပါးစပ်မှတဆင့် လိင်ဆက်ဆံမိရာကနေ HPV ပိုး ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ HPV ဟာ အဖြစ်များလွန်းတာကြောင့် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအားလုံးနီးပါးမှာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါရှိသူဆီမှာ ဘာလက္ခဏာမှ မပြသေးဘဲနဲ့တောင် တခြားသူတစ်ယောက်ကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်ခံရပြီးနှစ်နဲ့ချီကြာပြီးမှ ရောဂါလက္ခဏာပေါ်တတ်တာကြောင့် ကူးစက်ခံရကာစမှာ သိနိုင်ဖို့ခက်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ အမျိုးသားတွေမှာ HPV ကူးစက်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ဖြစ်စဉ်ပေါင်း တစ်နှစ်ကို ၃ သို့မဟုတ် ၄ သန်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
HPV ကြောင့် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်
လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ လိင်အင်္ဂါတဝိုက်မှာ အဖုလေးတွေအစုလိုက်ဖြစ်လာတတ်တာပါ။ အဖုတွေက သေးရင်သေးမယ်၊ကြီးရင်ကြီးမယ်၊ ပြားချပ်ချပ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ အဖုကနေ ဂေါ်ဖီပန်းလိုပုံစံ အဆုပ်လိုက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ လိင်အင်္ဂါတဝိုက်ကျန်းမာရေးကိုကြည့်ပြီး ဆရာဝန်က ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
HPV ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကင်ဆာတွေ ထဲမှာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်းကင်ဆာ၊ မိန်းမကိုယ်နှုတ်ခမ်းသားကင်ဆာ၊ လိင်တံကင်ဆာ၊ စအိုကင်ဆာ တို့ပါဝင်ပါတယ်။ HPV ကူးစက်ခံရရင် လျှာရင်းနဲ့ပသိ နေရာအပါအဝင် လည်ချောင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာလည်း ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို အမျိုးသားရော၊ အမျိုးသမီးပါ ကူးစက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ သင့်ကလေးက လိင်ကိစ္စတစ်မျိုးမျိုးမှာ ပတ်သက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်HPV ကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
ဘေးကင်းတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ လိင်ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းကို အသိပညာပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပေမယ့် အဲဒါတစ်ခုတည်းက ရောဂါတွေကူးစက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်သားသမီးအတွက် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ သေချာတာတစ်ခုက ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာမှာလိင်မှတဆင့် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုအများဆုံး ဖြစ်တဲ့ HPV ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးပေးဖို့ပါ။ ပြီးတော့ HPV ကာကွယ်ဆေးက ဘေးဥပါဒ်ကင်းတဲ့အပြင် အချိန်အကြာကြီးကာကွယ်မှုပေးနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုတွေက ဆိုပါတယ်။ တခြားကာကွယ်ဆေးတွေလိုမျိုးပဲ မပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။
ယခုဆောင်းပါးကို လင်းရောင်ခြည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ရောဂါရှာဖွေရေးစင်တာမှ စစ်ဆေးအတည်ပြုထောက်ခံပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
https://www.medicalnewstoday.com/articles/246670.php Accessed March 9th 2018
https://www.webmd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/hpv-virus-men#1 Accessed March 9th 2018
https://medlineplus.gov/ency/article/002003.htm Accessed March 9th 2018
The growing child: Adolescent (13 to 18 years).
http://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=the-growing-child-adolescent-13-to-18-years-90-P02175\_ Accessed March9th 2018
Why I should get the HPV vaccine?
http://www.hpvvaccine.org.au/teens/why-should-i-consider-getting-the-hpv-vaccine.aspx Accessed March 9th 2018
HPV က သင့်ရဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လို ထိခိုက်စေနိုင်သလဲ၊ ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲ
သင့်ကလေးငယ်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် လက်တစ်စုံက သင်ကိုယ်တိုင်ပါ